Njodzi dzeMombe neMadzinza | Martech Zone
Mugovera, December 31, 2011 Muvhuro, Kukadzi 8, 2016 Douglas Karr
Kune mabhuku akati wandei andakaverenga ayo aikanganisa manzwiro andaiita nezveInternet uye nekutengesa izere. Rimwe remabhuku raive Maka Earl's Herd: Maitiro Ekuchinja Massa Maitiro nekusunga Hwedu Hwechokwadi hunhu uye imwe yacho yaive yaGodin Madzinza: Tinoda Iwe Kuti Utitungamirire.
Zvakawanda zvekutaurwa kwemombe nemadzinza zvakanaka kwazvo… vatungamiriri vakakurukura (senge mu Vhidhiyo yaTED yeGodin) zvese zvinonakidza uye zvinokurudzira. Ini ndiri mutendi mukuru mumombe nemadzinza, asi ndiriwo munhu asina tariro mumaitiro evanhu kana zvasvika kumombe nemadzinza. Iwo mabhuku nevhidhiyo zvese zvinotaura kana vatungamiriri vachikwanisa kusunga boka zvakanaka… asi ivo vanofuratira rima divi reboka.
Zvematongerwo enyika zvinowanzo kuve chinhu chinodzivirirwa nemunhu wese pakushambadzira uye nehunyanzvi mablog. chinhu chose kuita nekugona kwemumiriri kuti akunde kana kukundwa musarudzo. Ini ndinotenda kushambadzira uye tekinoroji ndizvo chaizvo zvakakunda iyo 2008 sarudzo ndokuisa Mutungamiri Obama muWhite House.
Dzokera kumombe. Pane matambudziko maviri akakosha neboka.
Vatungamiriri Vakakanganisa - Dzimwe nguva munhu ane hushamwari, akangwara, akanaka kana akareba kupfuura vese mukamuri haana kunaka, asi isu tinowanzovatevera chero nenzira.
Vateereri Vanoteerera - Kuteerera kunombokurudzirwa nekutya asi zvakare kunokurudzirwa nekusaziva.
Chii chakafuridzira iyo blog positi ndeyezvino mamiriro ezvematongerwo enyika enyika. Tora semuenzaniso, Mutungamiri Obama. Imwe yema soundbites atiri kunzwa izvozvi uye imwe icharamba ichikurumidza kusvika pasarudzo ndeyekuti President Obama vakati MaAmerican vaive nehusimbe. Quote inomirirwa zvisirizvo asi inodzokororwa mukati mekwese kutenderera kwezvematongerwo enyika, hurukuro kana gakava. Kunyangwe ichishandiswa kunze kwechimiro, vatungamiriri vari kurudyi vanoshandisa iyo quote uye yavo mombe inoenderera ichisimudzira pfungwa yekuti Obama anotenda zvechokwadi vagari vedu vane husimbe. Handizvo zvaakataura.
Usati watanga kufunga kuti ini ndiri kungo sarudza kurudyi, ini ndinowedzera kuti zvematongerwo enyika kubva kuruboshwe dzakangotyisa. Nekuti Mutungamiri Obama vashoma, vazhinji kurudyi vakanyoreswa sevanosarura nekuda kwekungopokana nezvematongerwo enyika. Ndiko kupomera kwakaomarara kudzivirira nekuti zvinoreva kuti haugone kupokana neMutungamiriri - chero chinhu. Izvi zvinosuwisa uye zvinoramba zvichisundidzirwa nevamwe vanhu vari kuruboshwe-kuruboshwe. Inotofanira kumira nekuti haina zvibereko uye inopopota rusaruraganda haisi kuita chero chinhu kubatsira nyika. Asi inzira inoshanda yekuparadzanisa mombe!
VaRepublicans vanoramba vachidenha mimwe mitero uye kuisirwa mapurogiramu matsva uye mari munyika ino nekuti maonero avo ndeekuti isu hatigone kuzvikwanisa. Mhirizhonga kuGreek nedzimwe nyika dzekunze dzakatangwa nekuda kwekucheka muzvirongwa zvehurumende zvinofanirwa kunetsa kune wese munhu. Asi nharo kubva kuruboshwe inogara ichidzoka "une hanya nevanhu here kana kuti hauna iwe?" Kana iwe uchida kutema zvirongwa, hauna hanya nevanhu. Asi patinoshaya mari, ndiani anobatsira izvozvo? Nomuzvarirwo, iyo hurukuro inobva yaenda kunowana imwe mari (aka: yakanaka share). Mombe dzakakamurwa.
Ndiri kuedza chaizvo kuti zvandinotenda zvisabude panhamba, uye ndongotaura nemashandiro anoita mapato edu ezvematongerwo enyika nekushandisa boka. Zvakaipisisa pane kunyepa - kana kungoita kunge zvisirizvo - ndiyo nzira iyo boka rinorwisa avo vari kunze kwaro. Ndino vimbisa kuti ini ndinowana mashoma mashoma emashoko akanangana nezve ichi posvo kubva kune rimwe divi kana rimwe. Kana boka rikarwisa, zvinorwadza chaizvo uye simba chairo kana kutya kwekurwiswa kunogona kufambisa boka racho nenzira isiri iyo. Vanhu vazhinji vanonzvenga boka nekusareva chinhu zvachose. Handifunge kuti izano rakanaka. Tinogona kunongedzera kunenge hutsinye hwese munhoroondo - kunyangwe iri hondo kana bhizinesi, uye zvinowanzouya kumutungamiri anovimbwa naye aive akarasika uye neboka raiteverwa zvakapusa nekuda kwekutya kana kusaziva. Mombe dzakatungamira kuHondo Yenyika uye hupfumi hwakapunzika.
Kana iwe uchinyatsoda kuona mumwe muenzaniso wezvematongerwo enyika weizvi mumavhiki apfuura, iwe unofanirwa kungotarisa kuna Ron Paul nekurapwa kwake nevezvenhau nebapiro rerudyi. Kana Paul akahwina Iowa, ndakanzwa panhepfenyuro mbiri huru dzichiti "inoisa huchokwadi hweiyo Iowa caucus mubvunzo“. Ini ndinofungidzira zvinoreva kuti Iowa haisisiri chikamu chemombe dzatinodaidza kuti "United States".
Wow… chaizvo? Saka kana ruzhinji rwevatungamiriri vezvematongerwo enyika vasingabvumirane nevazhinji vavhoti, dambudziko harisi maonero avo… ndezvekuti vanhu vangori mbeveve zvekutadza kuita sarudzo yakanaka? Ron Paul anoenderera mberi achinyorwa zvisina tsarukano pamatanho mazhinji ... kunyangwe paine humbowo hwakawanda hunotsigira pfungwa dzake uye nhoroondo yekuvhota. Asi mombe haifarire Ron Paul. Ndiye wekunze uye vatungamiriri vemombe vari kuita zvese zvavanogona kuti vamuviga nekukurumidza sezvinobvira.
Mumwe muenzaniso musarudzo iyi yaive sarudzo yandakaona kuti kupi chete 6% yevavhoti vanochengetedza vakati Donald Trump aizochinja vhoti yavo. Ndakaona nhepfenyuro mbiri dzakasiyana uye vese vakadzinga Trump zvichibva pamhedzisiro yevhoti. Asi kana iwe ukamira uye ukafunga nezvazvo, 6% ipesheni huru. Hutungamiri hwakawanda hwakakundwa uye hwakarasika pane zvishoma pane izvozvo! Nekudaro, boka racho haridi kuti VaTrump vanyurure zvinhu… saka kumonyanisa sarudzo yaive sarudzo iri nyore.
Kana ndichitaura zvematongerwo enyika nevanhu (aka boka), ndinowanzo kunzwa, "Iye mutauri ane hushamwari!" kana "Iye igomba *!" apo ini ndichikurukura nezveMutungamiriri iye zvino nevamiriri veRepublican. Pandinongonzwa mazwi akadaro, ndinobva ndapera chiveve nekuti zvinoratidza zvachose kusanzwisisa nyaya chaiyo… nyika yedu ichaita zvirinani kana kwete pasi pehutungamiriri hwemunhu iyeye. Ini ndaigona kutarisira kushoma mashandiro anoita mutauri uye pamwe ini ndiri kutotarisira kune ** gomba rinotevera. Dzimwe nguva ma ** maburi anoita kuti rimwe basa riitwe.
Muenzaniso wekupedzisira: Vabereki vangu nguva pfupi yadarika vakashanya ndokutaura nezvavo kuchengetedzwa kwevanhu. Vakashanda zvakaoma hupenyu hwavo hwese - dzimwe nguva vabereki vangu vese vakashanda akati wandei mabasa. Baba vangu vakaregedzawo basa kubva kuNavy Reserves. Ivo vaviri semi-pamudyandigere uye vanounganidza kuchengetedzeka munharaunda. Ndakavayeuchidza kuti sei taive nechengetedzo yemagariro uye mashandiro aiita kare ikako… pamwe neavhareji tarisiro yeupenyu uye ndiani aida hurongwa uhu. Vabereki vangu vese vanochengetedza uye vaive vakatendeseka… vakanzwa kuti vakaisa muhurongwa uye vaive musoro kuwana mubhadharo wavo. Izvo zvakapfupisa zvakapfupisa kuti boka rinonzwa sei uye kuti boka rinoita sei kune chero hurukuro yekucheka kuchengetedzeka munharaunda - zvisinei nekuti idanho rakakodzera rekuona solvency yesystem.
Iwe ungade kufunga kuti vatungamiriri vakanganisa vachafukurwa uye huchenjeri hweboka hunokunda. Ini zvechokwadi handina kana rutendo kuti izvo zvichaitika. Chaizvoizvo terevhizheni inotonga nzira dzepamhepo, vanhu vazhinji vanovhotera American Idol kupfuura musarudzo, uye boka rinoramba richivhotera yavo-yenguva pfupi yekuzvifarira pane izvo zvakanaka kumombe. Mubasa rangu rekushambadzira, ndakashanda kumakambani asina kugadzikana akakunda uye makambani anoshamisa airwira.
Zvinosuruvarisa (kana kuita rombo rakanaka kune vamwe) kuti chokwadi kazhinji hachiwanikwi munzira yemafungiro. Uye kana iwo mafungiro achienderera mberi pamusoro pemombe, zvinotonyanya kusimba. Kusunga iro simba chikamu chebasa rangu semushambadzi. Isu tinowanzo funga nezve hunhu hwemombe izvozvi uye nekuisa nzira dzinosimudzira hunhu hwekufananidzira hwemombe kune edu vatengi zvakanakira. Ini ndinofungidzira izvo zvinondiita chikamu chechinetso.
Tags: 2011 sarudzosarudzodangaObamaron paulrudzi
Viralheat: Yemagariro Media Kuongorora kweSMB